Inotyisa ... $ 8.8 Bhiriyoni Ichashandiswa paHalloween Gore rino | Martech Zone
Muvhuro, October 28, 2019 Muvhuro, October 28, 2019 Douglas Karr
Zviri pachena kuti kumakambani nevashambadzi vanonongedza echinyakare maHalloween, kuburitsa Pinterest neFacebook kuti vasvike kune avo vekare vanhu vangave mune zvaunofarira. Nokuenzanisa, Instagram, Snapchat, uye TikTok ndiwo mapuratifomu akanakisa e "ruzivo" rwezviratidzo - kunyanya kana iwe uchipa kukwezva kusingabvumirwe gore rino - uye vatengesi kuti vasvike iro diki revanhu vepati reHalloween.
The sherefu, Halloween By The Numbers
Statistics yeHalloween Iri Kumusoro uye Kuderera
Candy ichiri chakakurumbira chinhu kutenga kuHalloween ne 95% yevanopemberera vachinhonga zvimwe kuzuva guru.
Up - 72% yevaipemberera vari kushongedza imba yavo.
Up - vanopemberera vanoshanyira dzimba dzinotambudzwa vakasvetuka kubva pa18 muzana kusvika 22 muzana gore rino.
pasi - Vashoma vanhu vari kuronga kushandisa mari pazvipfeko, uye makadhi ekukwazisa.
Maitiro eHalloween uye Chizvarwa Z
Imwe yemaseti anonakidza e data Shefu rakavhomorwa yavo infographic inoratidza misiyano yekuti sei Gen Zers pakati pemakore gumi nemasere nemakumi maviri nemana vanopemberera Halloween kana ichienzaniswa nevanhu vazhinji.
Gen Z vakuru vane mukana wakanyanya wekugara pamba uye kupfuudza zviwitsi kupfuura muvhareji weHalloween anopemberera (56% yeGen Zers vachazviita vachipesana ne66% yevaHalloween vese).
Nekudaro, vakuru Z Gen Z vanowanzo kwanisa kupfeka mumapfekero (73% maringe ne47%).
Gen Z vakuru vangangoshanyira imba isina huni (40% maringe ne22%),
Gen Z vakuru vane mukana wakanyanya wekuenda kana kukanda pati (53% kana 32%).
Tags: HalloweenHalloween kutengaICSCInternational Council yeZvekutenga NzvimboPinterestzvigadzirwa zvemitengochigadzirwa kuiswakudzokera shureevanhu vezvenhaumushandisi akagadzira zvemukatimuzambiringaYouTube